गणतन्त्रवादी रेखाकाे राप्रपामा उम्मेदवारीबारे दीपकराज गिरी भन्छन् : कांग्रेस–एमालेमा पनि राजा ल्याउनु पर्छ भन्नेहरू छन्...
काठमाडाैं | मंसिर १८, २०७८
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालको महाधिवेशनमा रेखा थापाले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
गणतन्त्रवादी रेखा राप्रपामा कसरी भन्ने विषयमा पछिल्लो समय चर्चा भइरहेको छ ।
यसबारे चर्चित हास्य कलाकार दीपक राज गिरीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
गिरीले कांग्रेस एमालेमा पनि राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने मान्छेहरू रहेको भन्दै रेखा थापाले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको बताएका छन् ।
उनले रेखाको पक्षमा फेसबूकमा लेखेका छन्, 'गणतन्त्रवादी रेखा कसरी राप्रपा ? कांग्रेस एमालेमा पनि राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने बिचार राख्ने मान्छेहरू छन् ,अब उनीहरू कांग्रेस वा एमाले हुन वा होइनन ? त्यसै गरेर राप्रपामा पनि त राजा ल्याउनु हुन्न भन्ने धार पनि होला वा हुन सक्छ नि ‘‘न रेखा त्यसमा पर्छिन् कि ?'
यस्तै राजनीति फिल्म खेलेको जस्तो सजिलो छैन भन्ने टिप्पणीलाई पनि गिरीले जवाफ दिएका छन्, उनले लेखेका छन्, रेखा थापालाई कुन्ताजी ले राजनीति ,फिल्म खेलेको जस्तो सजिलो छैन भन्नुभएछ, कस्ले भन्यो तपाईलाई फिल्म खेल्न सजिलो छ भनेर‘ एकचोटी ट्राइ गरेर हेर्नु हुन्छ ? क्यामेरा अगाडि तपाईको पसिना छुट्ने छ !! संसारका सबै काम आ आफ्नो ठाउमा गार्है नै हुन्छ । त्यसैले कुनै पेशा लाइ सजिलो ठान्ने काम नगरौँ ।'
गिरीले नायिका थापाले महामन्त्रीको पदमा उम्मेदवारी दिनु स्वागतयोग्य रहेको समेत बताएका छन् ।
परिसंघको अध्ययन – उद्योगको क्षमता उपयोग ७० प्रतिशत वृद्धि
अल्लु अर्जुनको लोभलाग्दो कार कलेक्सन, कहाँ जाँदा कुन चढ्छन् ?
'पुष्पा' फिल्मबाट देश र विश्वका करोडौं दर्शकको मनमा राज गरेका तेलुगु फिल्म स्टार अल्लु अर्जुनलाई धेरै चर्चामा रहन मन पर्दैन । उनी आफ्नो सादगीका लागि चिनिन्छन् । तर, उनी कार कलेक्सनका भने सोखिन छन् । उनीसँ...
जान्हवी कपूरले उडाइन् होश !
बलिउड अभिनेत्री जान्हवी कपूर आजकल खुबै अंगप्रदर्शन गर्न थालेकी छन् । अभिनयबाट खासै प्रभावित पार्न नसकेकी जान्हवी कपडा खोलेर प्रशंसकहरूलाई लोभ्याउन खोजिरहेकी छन् । हालै उनले इन्नरवेयर देखिने गर...
‘आश्रम’की ‘बबिता’ले साडीको पल्लु खसालेर पोज दिएपछि...
‘आश्रम’ फेम ‘बबिता’ अर्थात त्रिधा चौधरी रिलमा मात्र नभई वास्तविक जीवनमा पनि निकै बोल्ड छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनी आफ्ना हट तस्वीरले गर्मी बढाइरहेकी हुन्छिन् । हालै त्रिधाले...
आदित्य चोपडाले किन रद्द गरे सलमान र शाहरुखको चलचित्रको छायाँकन
कोरोनाले हरेक काम गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई क्षति पुर्‍याएको छ । अझ विशेष मारमा भने चलचित्र क्षेत्र पर्ने गरेको छ । कोरोनाका कारण धेरै चलचित्रको रिलिज मिति सारिएको छ । आउने चलचित्रको छायाँकन पनि र...
स्वीमसुटमा देखिएकी सोफीले लेखिन्- मलाई बस् भिटामिन सीको एक डोज चाहिएको छ
बलिउड अभिनेत्री सोफी चौधरी आफ्नो लुक र स्टाइलिस स्टाइलका कारण निकै चर्चामा छिन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना तस्वीरहरू आफ्ना फ्यानहरूसँग भिडियो शेयर गरिरहन्छिन् । यसैबीच उनको एउटा तस्वीर भाइरल भइरहेक...
आफूलाई बढी जोखिम लिने ठान्छु भन्दै मौनीले सार्वजनिक गरिन् बोल्ड तस्वीर
मौनी रोयले आफ्नो ताजा फोटोसुटका तस्वीरहरू इन्स्टाग्राममा शेयर गरेकी छन्, जसमा उनी बोल्ड र हट पोज दिएको देख्न सकिन्छ । तस्वीरमा मौनी रोयले ट्रान्सपरेन्ट सेतो नेटेड अफ सोल्जर टप लगाएकी छन् । यसका अलावा उनले...